Home » Featured » Postium Korea, Ltd. wuxuu ku dhawaaqay iibiyaha cusub ee Ameerika
Postium Korea, Ltd., naqshadeeye iyo soo saaraha imtixaan ficil ah oo loogu talagalay daawashada sawirada iyo sawirada, waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan magacaabista America Post America inay noqoto qaybtooda gaarka ah ee North and South America. Postium America waxay bixin doontaa hage khabiir ah oo ku saabsan xulashada sheyga iyo isdhexgalka iyo bixinta alaabta iyada oo loo marayo wada-hawlgalayaasha dukaanka khayraadka ku-darka ah ee ku baahsan Maraykanka.
"Waxaan ku faraxsannahay in kooxda Hey'adda US Posti ay ku soo biiraan dadaalkeena ah in aan balaarino astaanta caalamiga ah," ayaa sheegay in Sung Il Cho, madaxweyne at Postium Korea, "Waxay leeyihiin waayo-aragnimo aad u ballaaran oo ku saabsan iibinta kumbuyuutarka iyo suuq-geynta kumbuyuutarka waxaana ay noqon doontaa khayraad weyn oo loogu talagalay iibiyeyaasha iyo macaamiisha oo kale."
Shirkadda Postium America, Tim Giraldin iyo VP ee Sales & Marketing, Wes Donahue, ayaa ka go'an inay adeegsadaan waayo-aragnimadooda iyo aqoontooda wax soo saarka iyaga oo adeegsanaya habka macaamiisha si ay u balaariyaan qaybta suuqa ee boostada.
"Tani waa waqti aad u xiiso badan." ayuu yiri Wes Donahue, "Warshadeenu waxay wax ka beddeleysaa qaababka cusub ee qaybinta iyo waxqabadyo badan oo ka soo baxa inta aan horay loo arag. Teknoolojiyada cusub sida HDR iyo 4K ayaa isbedelaya sida abuurayaasha fikradaha ay muujinayaan aragtida hal-abuurka ah iyo Postium America waxay bixisaa bandhigyo badan oo muuqaal ah, midabo-sax ah si loo hubiyo in aragtidooda si daacadnimo ah loo soo saari karo. "
Tan iyo markii la aasaasay 1999, Postium Korea waxay ahayd shirkad lagu kalsoonaan karo oo warbaahin ah, muuqaal muraayad iyo qalab studio ah shirkadaha caalamka oo dhan. Muddo ka badan tobaneeyo sano, waxay ka kooban yihiin khibrad farsamo oo ay si toos ah uga helaan macaamiisha si ay u horumariyaan, injineernimada iyo soo saarayaasha kormeerayaasha farsamoyaqaanada ee aaminsan xirfadlayaasha caalamka.
Kormeeraha cusub ee 4K HDR-Ready ee ugu dambeeyay ayaa ka mid ah kuwa ugu awoodda badan xagga warshadaha iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinka gaarka ah iyo kuwa cusub. Waxay ku dadaalaan in ay bixiyaan xalal loogu talagalay macaamiisha farsamada, shuruudaha hal-abuurka iyo shuruudaha isticmaalka tiknoolajiyada ugu horumarsan.
Postium waxaa ka go'an in ay bixiso xalal guud oo loogu talagalay bandhigyada soo saarista sawirada iyo sawirada, iyagoo la wadaagaya guusha ay la leeyihiin lamaanayaasha, iyo noqoshada hoggaamiyaha caalamiga ah ee kormeerida fiidiyowga xirfadlayaasha ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan soo booqo www.postiumamerica.com ama la xiriir Postium America at 833-POSTIUM (833-767-8486) ama Sales@postiumamerica.com.
2015 hoos bitrate Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive dhexgalka isovideo JCT-VC MStar dhimista buuqa SoftAtHome Spears & Fiilooyinka UHD / 4K / HD viarte Video Engineer Warsaw	2018-10-30
Previous: VITEC waxay kor u qaadaysaa Xujooyin, Iskudubarro kulamo Wareegga WFX 2018
Next: LEAD AUDIOMISU QAABKA QALABKA